Uvukele emgwaqeni umphakathi wase Folweni – Isambane News
Home > Breaking News > Uvukele emgwaqeni umphakathi wase Folweni
Uvukele emgwaqeni umphakathi wase Folweni
June 26, 2018 Isambane News
Nomfundo Khumalo _
Umgwaqo uM35 usaleuvaliwe kungahambi lutho
Bathukuthele bagane unwabu abahlali base Folweni, eNingizimu ye Theku, kulandela ukuthi bafuna ukufakelwa amaRobhothi emgwaqeni omkhulu U M35 ngase Boxer Superstore. Sekukaningi bebhala befuna usizo mayelana nokufakelwa amaRobhothi kulomgwaqo, osuthathe imiphefumulo edlulele kweyishumi kulonyaka uqalile kodwa akwenzeki lutho.
Sekuyiminyaka bezama ukuthi bathole usizo Kumnyango weZokuthutha kanye nabathintekayo.
Okhulumela abahlali base Folweni Township uNkosinathi Gumede omele umphakathi waku Ward 95 uthe bafika kulesiteleka ngenxa yokuthi bafuna ukulekelwelwa ukuthi kube khona irobhothi, lokho kulandela ukufa kwabantu kulomgwaqo abanalo uhla lwabo ngenxa yezingozi ezenzeka kulomgwaqo.
Uqhube wathi “ Sizamile ukuthola usizo kubuholi beNdabuko, abazamile ukwenza imizamo yokuthi bathole umnyango weZokuthutha kodwa kube yize neze.Sizamile futhi ukukhuluma nabamatekisi ukuthi nabo bazame kodwa bahlulekile.Sizamile futhi ukuthi sikhulume nothisha basendaweni njengoba izingane ezifunda khona ziwela kulomgwaqo oyingozi ,okuyibona abathe bayibuyisela kumphakathi”.
Emva kwalokho babe sebehambisa incwadi kumnyango weZokuthutha abangazange- ke khona baphendulwe noma banakwe okuyilapho bethathe khona leligxathu lokuthi bavukele emgwaqeni.
Obephuma kwa Safety and Security eThekwini Municipality uMnu Mlotshwa uthembise ukuthi uzohlangana no Njiniyela ,balucubungule loludaba bese bebuyela kuwona umphakathi. Uthembise ukuthi lizothi liphela lelisonto abe esebuyelile emphakathini nendlela eyaphambili.
Kuvalwe umgwaqo omkhulu M35 okuphazamiseke abasebenzi kanye nabashayeli.Bathembise ukuthi uma kungenzeki lutho bazoqhubeka nesiteleka kuze kube khona osukumayo enze utho.
Abasakhathalele kuthenjwa, sebekhathele ukulindiswa ubala.Iminyaka emithathu yonke belindile kodwa lutho ukusizakala.
Isthombe: Nomfundo Khumalo
Temple of Faith Church Presents : Hlanganani – The Gathering
Isambane Business Advertiser July 2018 Release – Issue 1